Yintoni inethiwekhi engathembekiyo, ngaphandle kwesidingo sokwethemba - uCazoo
Ikhaya » Ikhaya » Yintoni inethiwekhi engathembekiyo, ngaphandle kwesidingo sokuthenjwa
tag: block Chain, iinkqubo embindini, iinkqubo zokwabela abaphantsi amagunya, ukungathembeki
Inkqubo ukungathembeki Kuthetha ukuba abathathi-nxaxheba abadingeki ukuba bazi okanye bathembane okanye umntu wesithathu ukuze le nkqubo isebenze. Kwimeko engafunekiyo yokuthemba akukho ziko elinye linegunya kwinkqubo, kunye nemvumelwano kufikelelwe kuyo ngaphandle kokuba abathathi-nxaxheba babe nokwazana okanye ukuthembana ukuba akunjalo kwenkqubo ngokwayo.
Ipropathi yendalo yokungathembeki kwinethiwekhi yoontanga (P2P) yaziswa yiBitcoin, njengoko ivumela yonke idatha yentengiselwano ukuba iqinisekiswe kwaye igcinwe ngokungaguqukiyo kwi blockchain esidlangalaleni.
Ithemba likhona kuninzi lwentengiselwano kwaye liyinxalenye ebalulekileyo yoqoqosho. Nangona kunjalo, iinkqubo ngaphandle kwesidingo sokuthembela zinakho ukuphinda zichaze unxibelelwano kwezoqoqosho ngokuvumela abantu ukuba bathembe iikhonsepthi ezingaqondakaliyo kunamaziko okanye abanye abantu besithathu.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba iinkqubo "ezingathembekanga" azisusi ngokupheleleyo ukuthembana, kodwa endaweni yoko bayasasaza kuhlobo loqoqosho olukhuthaza isimilo esithile. Kule meko kuchanekile ngakumbi ukuthi ukuthembana kuyancitshiswa kodwa akupheliswa.
I iinkqubo embindini engekho sono ukungathembeki Nanjengoko abathathi-nxaxheba benikezela igunya kwindawo ephambili kwinkqubo kwaye bayigunyazisa ukuba yenze kwaye inyanzelise izigqibo. Kwinkqubo esembindini, ukuba nje ungathemba umntu wesithathu omthembayo, le nkqubo iya kusebenza njengoko bekucwangcisiwe. Kodwa lumkela iingxaki, nokuba zinkulu kangakanani na, ezinokuvela ukuba iqumrhu elithembakeleyo .. alithembekanga. Iinkqubo ezizii-centralised zithambekele ekusileleni kwenkqubo, uhlaselo okanye ukubiwa. Idatha inokutshintshwa okanye ilawulwe ligunya eliphambili ngaphandle kogunyaziso loluntu.
Ndiyathemba inkqubo esembindini efana neBinance, endikholelwa ukuba imbi kakhulu kwaye ithembekile. Ungasifunda isikhokelo apha ukuze uqonde ukuba yintoni iBinance kunye nendlela yokuyisebenzisa. Ngaba uyafuna ukuthenga imali yedatha kwiBinance? Ewe, yenza ngokucinezela iqhosha elingezantsi: uya kufumana ifayile ye 20% isaphulelo kwiikhomishini, ngonaphakade! Ngoba kutheni?
Thenga i-CRYPTOCURRENCIES KWIMALI
Ngoku masifumane intanda-bulumko encinci, kodwa ncamathela kum: xa kuziwa emalini, iinkqubo ezizezinye mhlawumbi zinomtsalane oxhaphake ngakumbi kuneenkqubo ezisasazekileyo ( ukungathembeki), Njengabantu bathanda ukonwaba ukwalathisa ukuthembela kwimibutho kuneenkqubo. Nangona kunjalo, ngelixa imibutho yenziwe ngabantu abanyotywa ngokulula, iinkqubo ngaphandle kwesidingo sokuthenjwa zinokulawulwa ngokupheleleyo yikhowudi yekhompyuter.
I-Bitcoin kunye nobunye ubungqina bee-blockchains zomsebenzi bafumana ezabo ukungathembeki ukubonelela ngenkuthazo yezoqoqosho ngokuziphatha okunyanisekileyo. Kukho inkuthazo yemali yokugcina ukhuseleko kwinethiwekhi, kwaye ukuthembela kusasazwa kubathathi-nxaxheba abaninzi. Oku kwenza ukuba i-blockchain inyamezeleke kakhulu ekubeni sesichengeni kunye nohlaselo, ngelixa ususa amanqaku omnye okusilela.
€ 44,90 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
Inqaku langaphambiliImbali yeBlockchain
Inqaku elilandelayoAkukho nto